AMPPS: Jawiga Horumarinta Websaydhka Softaculous ee GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Si loo hirgeliyo xalka Server-ka websaydhka (Webserver, oo af-ingiriisi ah) goob kasta oo la dhigto Nidaamyada Hawlgalka (Windows, MacOS iyo GNU / Linux), waxaa jira codsiyo badan oo la heli karo, kuwaas oo si gooni gooni ah u imaan kara isla markaana si wada jir ah u wada shaqeyn kara, ama isku dhafan a rakibo fudud oo adag, sida kiiska AMPPS.
AMPPS Waa a xal software isku dhafan waayo, horumarinta webka, kaas oo bixiya rakibid fudud iyo maamulida kuwa ugu caansan uguna caansan Nidaamyada hawlgalka jira. Waxay badanaa bixisaa codsiyo sida Apache, MySQL, MongoDB, PHP, Perl, Python, kuwa kale, iyada oo loo marayo a qalab rakibiyaha garaafka ah qaab ah Softaculous.
Oo in kastoo gudaha GNU / Linux Had iyo jeer waa la doorbidaa, gaar ahaan marka la eego shirkadaha ama ururrada heerka sare ama muhiimadda leh, in la hirgeliyo xalalka Shabakadaha internetka iyada oo ku saleysan rakibaadda, qaabeynta iyo isugeynta gacanta ee qalab kasta oo iyaga saaran, waxaa jira kiisas ay ku jiraan waxbarasho, barasho, cilmi baaris ama tahriib a madal bilaash ah oo furan, Waxaa la doorbidaa in la isticmaalo Xal isku dhafan, sidaan ku aragnay qoraalkeenii hore ee la xiriira, ku saabsan XAMPP.
ka Xal isku dhafanma noqon karto tan ugu fiican, laakiin xaqiiqda u oggolow rakibo deg deg ah oo fudud barnaamijyada shabakadaha ama shaqeynaya, wax lagu daro ama dejinno dhowr guji oo jiir ah, waxaad isbeddel ku sameyn kartaa marka la eego yoolka guusha aad raadineyso, sida, ardayda ama dhalinyarada wax bara in laga shaqeeyo Shabakadaha internetka ku saleysan GNU / Linux.
1.1 Tilmaamaha iyo Faa'iidooyinka
1.2.1 Tallaabada 1 - Soo dejiso AMPPS
1.2.2 Tallaabada 2 - Raadinta AMPPS rakibidda
1.2.3 Tallaabada 3 - Ku orod arjiga AMPPS ee rakiban
1.2.4 Faallooyinka ku saabsan AMPPS
Waa xirmo dhammaystiran, oo laga isticmaali karo kombuyuutarrada dusha sare iyo kombuyuutarrada si loo siiyo codsiyo badan oo shabakad furan.
Waa xirmo yar oo kooban, laakiin dhammaystiran, oo bilaash ah oo softiweer ah oo daqiiqado ku rakibaysa soona gaarsiisa barnaamijyada keydka macluumaadka sida MySQL, iyo luqadaha barnaamijyada hal khibrad isku dhafan. Intaa waxaa dheer, in loo oggolaado codaynta iyo tijaabinta PHP, codsiyada Perl iyo Python.
Waxay ku habboon tahay in loo isticmaalo kombiyuutarada miiska, ujeedooyin kala duwan sida waxbarid iyo / ama cilmi baaris, ama hubinta in geeddi-socodka hijrada (ka-gudubka) laga soo bilaabo horumarka illaa wax-soo-saarka ay yihiin kuwo siman oo aan xuduud lahayn.
Waxay leedahay faa'iidada ah, iyada oo loo marayo AMPPS, hay'adda horumariyaha waxay u oggolaaneysaa marin u helka barnaamijyada kale ee furan ee furan ee furan ee bilaashka ah iyo bilaashka ah.
Waxay bixisaa maamul fudud oo Apache iyo MySQL ah, marka lagu daro bixinta Xarun Amni oo sahlaysa hubinta rakibidda qaybaha isku dhafan.
Iyo sida Databases-ka, waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto xog-ururin badan oo MySQL iyo SQLite ah oo aad si fudud ugu maamusho phpMyAdmin iyo SQLite Manager.
Fursadan, waanu sameyn doonnaa Habka rakibida de AMPPS ku saabsan casri ah iyo mid hadda taagan Nidaamka Howlgalka (Distro) ku saleysan DEBIYAAN 10.
Tallaabada 1 - Soo dejiso AMPPS
Tag qeybta soo dejinta ee Bogga rasmiga ah ee AMPPS, oo soo dejiso nooca hadda jira ee loo heli karo Nidaamka Howlgalka GNU / Linux, sida hoos ka muuqata:
Tallaabada 2 - Raadinta AMPPS rakibidda
Marka hore waa inaad siisaa rukhsad dil rakibayaasha la soo dejiyey ka dibna waa in loo ordaa sida xididka superuser ama adeegsade ahaan nidaam ogolaansho maamuleed, ka faylka rakibiyaha ".run", kaas oo kiiskeenna hadda jira, uu ku jiro magaca galka gudihiisa "Soo dejiso" soo socda: Amps-3.8-x86_64.run, sida hoos ka muuqata:
Tallaabada 3 - Ku orod arjiga AMPPS ee rakiban
AMPPS waxaa lagu rakibay si toos ah wadada "/ Usr / maxaliga / ampps" oo ay weheliso barnaamijyadeeda kale ee la dhisay. Iyo in la maamulo AMPPS horay loo rakibay, waa in loo ordo sidii xididka superuser ama adeegsade ahaan nidaam ogolaansho maamuleed, ka faylka fuliya oo leh magaca soo socda "Ampps", sida hoos ka muuqata:
Faallooyinka ku saabsan AMPPS
In kasta oo xaqiiqda ah in aan khaladaad lagu tuurin rakibaadda oo ay fududahay in la sameeyo, markii la kacayo AMPPS dhamaan musqulaha la kiciyey lama arkin, iyo Adeegga Apache ma shaqeyn. Sidaa darteed, ma aanan bilaabi karin Server-ka websaydhka, mana arag Guddi maamul ni el Dhammaadka Dashboardka Isticmaalaha de AMPPS. Aniguna waan garan kari waayey sababta. Qashin-qubka, Waxaan kugula talinayaa inaad u isticmaasho XAMPP ka fiican tan AMPPS ee ku saabsan DEBIAN 10 oo ah xal isku dhafan.
Maareeyaha Adeegga AMPPS markay wax waliba si fiican u buuxsamaan:
Guddiga Maamulka AMPPS adoo adeegsanaya biraawsarka internetka adoo adeegsanaya dariiqa https://localhost/ampps-admin
AMPPS Dhammaadka Dashboard Isticmaalaha adoo adeegsanaya biraawsarka internetka adoo adeegsanaya dariiqa https://localhost/ampps
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan rakibidda iyo isticmaalka AMPPS on GNU / Linux, waxaad ka eegi kartaa ay Rasmi Wiki, iyo wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan mawduuca Deegaanada Horumarinta ama Qalabka ku saabsan GNU / Linux, waxaan kugula talineynaa aqrinta qoraaladeena hore ee laxiriira, taas oo ah, waxa ugufiican ama faa iidada badan Tifatirayaasha, IDE-yada, SDKs iyo Xakamaynta Nooca, iyo noocyada Web server, Databases iyo Barnaamijyada, Qoraalka iyo Luqadaha Calaamadaha.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «AMPPS», App waxtar leh oo qaab ah «Softaculous» jidaynayey fudud rakibaadda iyo maaraynta dhamaystiran «Entorno de desarrollo» ku saabsan Nidaamyada Hawlgalka Bilaashka ah iyo Furfuran, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » AMPPS: Jawiga Horumarinta Websaydhka Softaculous ee GNU / Linux
Maalinta injineernimada aduunka ee horumarka waara: Maarso 4